तलब कसरी बातचीत गर्न | USAHello देखि जब र क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
यसलाई आफ्नो काम मा थप पैसा को लागि अनुरोध गर्न गाह्रो छ. यो सोध्न सही समय अभ्यास र जान्न महत्वपूर्ण छ. जब तपाईं एक नयाँ काम सुरु कसरी तलब बातचीत सिक्न. एक खडा लागि अनुरोध गर्न कसरी पत्ता.
तपाईं नयाँ काम सुरु गर्नु अघि, तपाईं र तपाईंको कर्मचारी तपाईंले भुक्तानी गरिनेछ कति सहमत हुनेछन् र कस्तो लाभ तपाईं प्राप्त हुनेछ. केही जब लागि, तपाईं आफ्नो तलब बातचीत गर्न सक्छन्. वार्ता एउटा सम्झौता गर्न नेतृत्व भन्ने चर्चा हो. तपाईं तलब र लाभ कसरी बातचीत सिक्न भने, जब तपाईं एक काम सुरु तपाईं अधिक कमाउन सक्छ.
पछि, तपाईं एक काम हो र राम्रो तरिकाले गर्दा, तपाईं आफ्नो तलब मा वृद्धि बातचीत गर्न सक्छन्, जो एक खडा भनिन्छ.
म जब म मेरो तलब बातचीत के विचार गर्नुपर्छ?
जब तपाईं एक तलब बातचीत गर्दै, तपाईं बस पैसा भन्दा बढी बारेमा विचार गर्नुपर्छ. त्यहाँ थप एक सानो तलब लायक बनाउन लागि बातचीत गर्न सक्छन् अन्य लाभ हो.
धेरै जब लाभ प्रस्ताव, यस्तो स्वास्थ्य बीमा रूपमा, छुट्टी समय, र एक अवकाश योजना. तिर्ने काम $25,000 एक वर्ष तर तपाईं दिन्छ $10,000 लाभ अझ तिर्ने काम भन्दा राम्रो छ $30,00 कुनै लाभ संग एक वर्ष.
जहाँ तपाईँले भुक्तानी प्राप्त कति परिवर्तन बाँच्न. केही ठाउँमा अरूलाई भन्दा बाँच्न धेरै महंगा छन्. ती ठाउँमा, हाकिमहरूले नै काम लागि थप पैसा प्रस्ताव छ.
आफ्नो अनुभव, शिक्षा, र योग्यता सबै आफ्नो कौशल सुधार. हाकिमहरूले राम्रो कौशल र अनुभव लागि थप भुक्तानी गर्नेछ.
तपाईं भर्न कठिन छ कि एक काम को लागि लागू गर्दै? उहाँले योग्य कार्यकर्ता फेला कठिन समय भएको छ भने कर्मचारी थप भुक्तानी हुन सक्छ.
केही जब वर्ष को अन्त्यमा बोनस प्रस्ताव. यी हुन लक्षित-आधारित हुन सक्छ. यो हालतमा तपाईं राम्रो भने, तपाईं थप कमाउन हुनेछ. अरूलाई मा, तपाईं बिदाको लागि थप पैसा प्राप्त हुन सक्छ (क्रिसमस र नयाँ वर्ष) या जब तपाईं काम सुरु.
तपाईं एक काम प्रस्ताव प्राप्त गर्दा कसरी तलब बातचीत गर्न
जब कर्मचारी तपाईं एउटा प्रस्ताव पत्र पठाउँछ, प्रस्तावको लागि उनलाई धन्यवाद र तपाईंले यसलाई विचार गर्न चाहनुहुन्छ भन्न. जब तिनीहरूले तपाईंको प्रतिक्रिया आवश्यक सोध्न. केही अनुसन्धान गर्न र तलब काम र स्थानको लागि औसत तलब संग उचित प्रस्ताव भने पत्ता. तपाईं आवश्यकताहरु को सबै पूरा र पूर्व काम अनुभव छ भने, विचार तपाईं एक उच्च वेतन को लागि अनुरोध गर्नुपर्छ भने.
को म्याद अघि, कल वा कर्मचारी इमेल. तपाईं थप कमाउन र एक उच्च रकम सुझाव गर्नुपर्छ लाग्छ किन तिनीहरूलाई बताउन. आफ्नो कौशल र अनुभव कुरा. यसको लागि अनुरोध गर्न सबै भन्दा राम्रो छ 5% गर्न 10% थप कर्मचारी तपाईं प्रस्ताव भन्दा. स्वास्थ्य लाभ भने, बोनस, वा छुट्टी समय तपाईं अधिक महत्वपूर्ण हो, ती सट्टा बातचीत.
हाकिमहरूले केही दिन निर्णय गर्न लाग्न सक्छ. सामान्यतया, तिनीहरूले तपाईंलाई लागि आग्रह एक पहिलो मात्रा र बीच एक आंकडा कहीं आफ्नो प्रस्ताव वृद्धि हुनेछ. कहिलेकाहीं, तपाईं कुनै पनि वृद्धि प्राप्त छैन. तर सोधेर चोट छैन. यो पनि तपाईं आफ्नो कौशल बारेमा विश्वस्त छन् को कर्मचारी देखाउँछ.
अकुशल जब मा, हाकिमहरूले बातचीत कम सम्भावना. तिनीहरूले प्रति घण्टा वा प्रति हप्ता उनीहरूले भुक्तानी गर्नेछ रकम सेट छन्. तर तपाईं अतिरिक्त अनुभव वा कौशल छ भने, तपाईं बातचीत प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. यदि काम लागि एकदम राम्रो कार्यकर्ता छन् तपाईं पनि बातचीत गर्न सक्छन्.
तपाईं इमेल मार्फत सोध्नु निर्णय भने, तपाईं प्रयोग गर्न सक्छन् तलब बातचीत इमेल टेम्पलेट.
आफ्नो तलब बातचीत गर्ने बारे थप सुझाव एक भिडियो हेर्न
तलब उठ्छ कसरी बातचीत गर्न
एक खडा बातचीत सुरू तलब बातचीत जस्तै छ. तपाईं भुक्तानी भइरहेका छन् भन्दा लायक धेरै छन् किन देखाउन चाहनुहुन्छ. त्यसैले एक पटक फेरि:
आफ्नो कौशल र अनुभव कुरा.
आफ्नो अनुसन्धान गर्न: के अन्य मान्छे आफ्नो स्तर मा र समान जब लागि भुक्तानी भइरहेका छन् छन्?
वार्ता खोल्न एक विशिष्ट रकम अनुरोध.
एक खडा लागि सोध्न, तपाईं पनि काम मा तपाईँले गरेका कुराहरू बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं राम्रो काम गरेको छ भने, आफ्नो मालिक यसलाई दर्शाउन. शायद तिमी कम्पनी पैसा धेरै गरेका छन्. शायद तिमी कम्पनी मा सकारात्मक परिवर्तन मदत. यसको बारेमा कुरा गर्न नडराऊ. कम्पनीहरु राम्रो कर्मचारीहरु राख्न चाहन्छु, तिनीहरूले थप एक बिट तिर्न पनि. यहाँ तपाईं खडा माग्दै गर्दा सम्झना गर्न केही अन्य कुराहरू छन्:
काम मा ध्यान, तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकता मा
जस्तै, तपाईं लिएको छ अतिरिक्त जिम्मेवारी दर्शाउन, छैन उच्च कसरी आफ्नो कार भुक्तानी छन्.
राम्रो समय प्रयोग
कम्पनी पैसा गुमेको छ जब एक खडा लागि नसोध्नुहोस् वा भुक्तानी गर्न धेरै बिल छ. कम्पनी सोध्नुहोस् (तपाईं वा) सफल भएको.
तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ समयको लागि अनुरोध. सुन्न बढी सम्भावना तपाईंको कर्मचारी तिनीहरूले समय छुट्याइएको छ भने हुनेछ.
सकारात्मक तरिकामा सोध्न. तपाईं यसलाई अर्थ नभएसम्म - तपाईं के तपाईं के चाहनुहुन्छ प्राप्त छैन भने छोड हुनेछ भन्न छैन! समझौता गर्न तयार.
एक तलब बातचीत इमेल लेख्नुहोस्
तलब के हो?